စက်ဘီးဆွဲတဲ့….သရဲ။။။။။။။။။။။။။ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » စက်ဘီးဆွဲတဲ့….သရဲ။။။။။။။။။။။။။
Posted by “ဘီလူးကြီး”ogre on Jun 16, 2011 in Copy/Paste |9comments
မနက်ပိုင်းဝင်လာတဲ့ သတင်း….အဆန်လော်ကယ် ရထားကြိတ်သွားပြီ အကြိတ်ခံရတဲလူသေတယ် အခုကြိတ်တဲ့ရထားနဲပဲ အလောင်းကိုပြန်တင်လာတယ်။။
ကိုယ်ဂျူတီတော့မဟုတ် ဒါပေမယ့်မနေနိုင် ကျွန်တော်နေတဲ့နေရာနဲခြောက်မိုင်လောက်ဝေးတဲ ရှေ့ကဘူတာမှာဖြစ်သွားတာပါ ဘူတာမှာရထားစထွက်ထွက်ခြင်း
တွဲကြားမှာစီးတဲ့လူက ရထားအထွက်တွဲဆက် စပရိန်တွေဆောင့်ဆွဲရုန်းကန်တဲ့အခါ အရက်မူးနေတော့ ပြုတ်ကျပြီး တက်ကြိတ်တာပါပဲလူတွေဝိုင်းအော်ကြလို့
ကျွန်တော်တို့ဆီကိုရောက်ဘို့ ရထားဟာ မိနစ်နှစ်ဆယ်ခန့်မောင်းရမှာပါ ကျွန်တော်အောက်က စီနီယာများကို။။ ဟေ့ကောင်တွေစာရွက်စာတမ်းတွေအသင်လုပ်ထား
အလောင်းသယ်လာတဲရထားလာတာနဲ့ တစ်ခါတည်းတက်လိုက်သွား ဒီက ဘူတာရုံပိုင်ကြီးကိုလည်းတစ်ခါတည်းဆေးရုံပို့လိုက်ပြီပြောလိုက် တစ်ယောက်ကစက်ခေါင်းမောင်းနဲ
ဂါတ်ဗိုလ်ကိုသွားပြော ငါတို့ထွက်ခိုင်းမှရထားထွက်လို့ သေတဲလူ ဘယ်သူဆိုတာသိအောင်အရင်စုံစမ်းသူ့ပစ္စည်းတွေကိုစစ်။။ကြားလား
ရထားထွက်ရင် ငါနဲ့လူသုံးယောက် ရှေ့ဘူတာ ရထားကြိတ်တဲနေရာကိုသွားမယ် အသင့်ပြင်ထားကြ။
ရထားဝင်လာပါပြီ ဘယ်တွဲမှာလဲအလောင်းက ကြုံရာလူကိုမေးလိုက်တော့ ….ဟိုအလယ်တွဲမှာ…..အလောင်းကိုကြည်လိုက်တော့။။။။။။။။။
ဘယ်လက်မောင်းဂွကိုကြိတ်မိတော့ပြတ်လုပြတ်ခင်အနေအထား ခြေထောက်နှစ်ချောင်းလုံးကကြေမွနေပြီ သေရတဲ့အကြောင်းကတော့လယ်လက်မောင်းရင်းကို
တက်ကြိတ်တဲအတွက် ရင်ဘတ်ပိုင်းအတွင်းကလိစာတစ်ချိုပျက်စီးမှုကြောင့် ချက်ခြင်းသေရတာပါ။။အိတ်တွေရှာစမ်း ။။မှတ်ပုံတင်တွေ့တယ်အကို့ နာမည်က
လှမြင့် တဲ့ သာရဝေါအနောက်ဘက်ကမ်းက ငှက်ပျောတောလိပ်စာနဲ့““အေးဒါဆို ပို့လိုက်တော့။။ရထားထွက်ခိုင်းလိုက်။။““
ရထားကြိတ်တဲနေရာသွားမယ်။။။။စက်ဘီးကိုယ်စီနဲ့ ရထားလမ်းကြီးအတိုင်း ရှိနေတဲ့ခြေသွားလမ်းအတိုင်း ရှေ့ဘူတာကိုထွက်လာခဲ့ကြပါတယ်
ေ၇ှဘူတာကိုရောက်တော့လူအုပ်က မကွဲသေးပါတစ်ယောက်တစ်ပေါက်ပြောဆိုဝေဖန်နေကြတုန်းပါ ကြိတ်မိတဲနေရာက သွေးကွက်တွေကတော့အေးခဲနေပါပြီ
ရထားလမ်းဘေးအိမ်က ရေတွေသယ်ပြီး သွေးတွေပျောက်အောင်ရေလောင်းခိုင်း လိုက်ရပါတယ်။။
ရထားသံလမ်း တစ်လျှောက်ကြည့်လိုက်တော့ လူသားအစတွေ ကပ်နေတာတွေလို့ ။။။ ဟေ့ကောင်တွေရေ မြင်လို့မကောင်းဘူဟ တစ်ခုခုရှာပြီးခြစ်ထုတ်ပစ်
အဲဒီအသားစတွေခပ်ဝေးဝေးလွှင်ပစ်လိုက် ကျန်တဲလူတွေရပ်ကြည်နေမယ်အတူတူ ခင်ဗျာတို့ရွာထိပ်မှာဖြစ်တာ မြင်မကောင်းဘူးဝိုင်းကူကြဗျာ။။။
၀က်ရဲအသားဖတ်တွေလိုဖြစ်နေတဲ့ အစတွေကို လူအများခြစ်ထုတ်လွင်ပစ် သဲတွေဖြူးနဲ့နေ့လည်ပိုင်လောက် အားလုံးနေသားတကျဖြစ်တယ်ဆိုရင်ပဲ
နောက်တနေ့ မနက်ပိုင်းဝင်လာတဲ့သတင်း….ရထားကြိတ်တဲနေရာမှာစက်ဘီးစီးလာတဲလူတွေကို အဲဒီနေ့ညနေပိုင်း တစ်ယောက်ယောက်ကဆွဲလှဲသလို
အဲဒီနေရာမှာလဲကုန်ကြတယ်တဲ့ ဒူးကွဲတဲသူကွဲ နဖူးကွဲတဲသူကွဲနဲတဲ့ ညဘက်ရထားလမ်းဘေးက အရက်ဆိုင်မှာအရက်လာသောက်တဲ့လူတွေ ရပ်ထားတဲ့
စက်ဘီးတွေကိုလည်းနောက်ပြန်ဆွဲပြေးလို့ ညက အဲဒီနေရာဘယ်သူမှမဖြတ်ရဲ မသွားရဲ ရထားလမ်းဘေးကအိမ်တွေလဲစောစောအိပ် ဆိုင်တွေလည်းလဲစောစောပိတ်
။။။အာ….ဟုတ်တာပေါ့ ကျွန်တော်အရက်ကြိုက်တဲ့သူတောင် ပုလင်းဆွဲပြီးအိမ်မှာပဲသောက်လိုက်ရတယ်ဒါတောင် စောစောအပြေးမြန်လို့
။။။။အင်း ဒီလိုဆိုဒုက္ခ မနက်ပိုင်းရောကွ
။။။ဟာအကိုကလည်း ဒီလမ်းလေးနဲသွားလာနေရတာလေ ဒီညနေလည်းဘယ်သူမှဖြတ်သွားရဲမှာမဟုတ်ဘူး
။။။။ဒီညနေငါလာမယ်ကွာ မင်း ရွာမတံတားအကူးလေးကစောင့် ညနေငါးနာရီထိုးတာနဲ့ ရောက်လာမယ်
။။။။ဒီကောင် လှမြင့် ပဲဖြစ်မယ်ကွ မင်းကကြောက်လို့လား
။။။မကြောက်ပါဘူး နည်းနည်းတော့ဖြုံတယ်ဗျ ..ဟီး
လှမြင့် ရထားကြိတ်တဲနေရာနဲ့ တည့်တည့်ကအရက်ဆိုင်လေးရှေရောက်ရင်ပဲ ကျွန်တော်နဲအတူပါသူ စက်ဘီးရယ်ကျွန်တော့စက်ဘီးကိုပါ
ရထားလမ်းဘေးက မြေလမ်းလေးမှာပဲရပ်ထားခဲ့ပြီး အရက်ဆိုင်ထဲဝင်ထိုင်နေလိုက်ပါတယ် ဆိုင်ထဲမှာတော့ လူရှင်နေပြီး အရက်ေ၇ာင်းတဲ့
လင်မယားနှစ်ယောက်နဲသူ့တိုသားလေးတစ်ယောက်သာရှိပါတယ် ရထားကြိတ်သေတဲလှမြင့်သရဲညက သောင်းကျန်လို့ ဒီနေ့ညနေ လာသောက်
။။။မလုပ်ပါနဲ့ ငါလူရာ ညကတစ်ကယ်စက်ဘီးတွေနောက်ပြန်ဆွဲပြေးတာ ငါမျက်စိနဲတပ်အပ်မြင်တာကွ လူသုံးလေယောက်စုပြီးလိုက်ကောက်ရတယ်
။။။။ရပါတယ်ဗျာ အခုကျွန်တော်တို့စက်ဘီးတွေရပ်ထားခဲ့တယ် ညမှောင်ရင်ဆွဲပြေးမလားစောင့်ကြည်မယ်ဗျာ
တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ ရွာတောအုပ် ရထားလမ်းလေးဟာမှောင်ရီသန်းလို့ လာပါပြီ ညနေလော်ကယ်ရထားအစုန် ဘူတာမှာရပ်ပြီးပြန်ထွက်သွားတဲ့နောက်
ရုံပိုင်ကြီးမရှိပဲလက်မှတ်ရောင်းသာထားတဲ့ ဘူတာခွဲ ရွာမဘူတာလေးဟာ လူသူကင်းဆိတ်လို့နေပါတော့တယ်။။။
။။။မနေညကဒီအချိန်ဆိုဆွဲချနေပြီဗျ အခု ငါ့လူတို့စက်ဘီးကနေရာမရွေ့သေးဘူး
သုံးဦးသား လက်နှိပ်ဓါတ်မီးကိုစီနဲ အမှောင်ရိပ်မှာခုံပုလေးတွေချလို့ စက်ဘီးကိုသရဲဆွဲမယ့်အချိန်ကိုစောင့်ကြည်နေကြပါတယ် အရက်ဆိုင်ရှင်ရဲ့
မိန်းမကတော ကြောက်ရွံစိတ်နဲ့ ခြင်ထောင်ထဲမှာနားစွင်နေတယ်ထင်ပါ့။။
ခုနှစ်နာရီထိုးပါပြီ စက်ဘီးနှစ်စီးဟာ ရထားလမ်းသစ်ပင်အုပ်ရဲအမှောင်ထုမှာ ထောင်ရက်သား မျက်တောင်မခတ်တမ်းစောင့်ကြည့်နေတဲ့ ကျွန်တော်
တို့သုံးယောက် ခြင်တွေဝိုင်းအုံကိုက်တဲဒဏ်ကိုကြိတ်မှိတ်ခံရင်း ဇွဲနဘဲနဲစောင့်ကြည်နေဆဲပါ
ရှစ်နာရီ မထူးခြားပါ စက်ဘီတွေကအမှောင်ထဲမှာ ဒီတိုင်း။။။
။။။ရတယ် ကျွန်တော်ရွာထဲရောက်တဲ့ အထိလမ်းအတိုင်းဓါတ်မီးတော့ ထိုပြဗျာ
ရှစ်နာရီခွဲတဲ့အချိန်မှာတော့ ဓါတ်မီး ကိုယ်စီထိုးကာစက်ဘီးတွေပြန်ယူလိုက်ကြပါတယ် လိုက်စောင့်တဲ့အဖေါ် ကိုရွာထဲဝင်တဲ့အထိ ဓါတ်မီးနဲထိုးပြပြီး
အရက်ဆိုင်ရှင်ဦးလေးကြီးကိုနှုတ်ဆက်ကာပြန်ခဲ့ပါတယ်။။အဲဒီည က သရဲမမိခဲ့ပါ။။တောက်နာတယ်ကွာ။။
နောက်ညများမှာတော့ သရဲဆွဲသံမကြားရဘဲ သုံးရက်မြောက်ညမှာအဲဒီအဖြစ်မျိုးထပ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။။။
နောက်တစ်ကြိမ်စောင့်ဖမ်းခြင်ပေမယ့် အလုပ်မအားတာကြောင့် သရဲဖမ်းအစီစဉ်ကို လက်လွတ်လိုက်ရပါတယ် နောက်ပိုင်းရွာမှလူကြီးများက သေသွား
တဲ့နေရာမှာ ပရိတ်ရွတ်ခြင်း သံဃာမျာကို ပင်ဖိတ်ဆွမ်းကပ်ခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့တာကြောင့် သရဲခြောက်တယ်လို့တော့အသံမကြားရတော့ပါ။။
ကိုတိုင်သရဲဖမ်းခဲတာပါ။။။။ဒါပေမယ်မတွေခဲ့ရပါဘူး ….သာရဝေါ ရွာကြီးရဲ့ မလှမ်းမကမ်းကရွာ လေးတစ်ခုမှာ တစ်ကယ်ကြုံခဲ့ရတဲ့ အဖြစ်ပါ
နောက်ထပ်အဲဒီ ရွာမှာပဲဖြစ်ခဲ့တဲ့သရဲ ကိုယ်တွေ့ဇာတ်လမ်းရှိပါသေးတယ် ထပ်မံရေးသားပါမည်။။
ဘီလူးဆိုမှတော့ သရဲလာခြောက်ရဲပါ့မလားကွယ်။ ဒါပေမယ့် ကြောင်ကြီးတော့ လာမစမ်းနဲ့..စစ်ဘီလူး၊ ရဲဘီလူး၊ ထောက်လှမ်းရေးဘီလူး၊ သတင်းပေးဘီလူး၊ ကြံ့ဖွတ်ဘီလူး ဘယ်ဘီလူးမှ ကြောက်ဖူး။ မကျေနပ်ရင် ယူအက်စ်ကောင်စစ်ဝန်ရုံးသွား ဗီဇာဝင်၊ ရမှဆက်ပြော….
ကြောင် လီးပူ ပဲကွာ..ဒုက္ခ..ဒုက္ခ
ဟ်ိတ်ကောင်လီဘူး၊ မိုက်ရိုင်းလှချည်လား။ အေး ငါကလည်း မင်းကို !@#$%^ မကျေနပ်ရင် နောက်ထပ်ဆယ်ခါပြန်ထပ် ပြောတယ်ကွာ၊ အဲဒါမှ မကျေနပ်သေးရင် စနေနေ့ကျရင် မြေနီကုန်း စီးတီးမတ် ကော်ဖီဆိုင်ကို နေ့လည် ၁၂နာရီခွဲလောက် လာခဲ့စမ်း၊ ကျောင်းမှန်း ကန်မှန်း၊ ကြောင်မှန်း ကံမှန်း သိသွားရအောင် လုပ်ပြရသေးတာပေါ့။ ငါ့ရှေ့မှာ ကင်မရာအိတ်ချထားပြီး မင်းကို ဆုံးမဖို့စောင့်နေမယ်… :mad:
ကြောင် ဆိုတော့ ကြောင်ရူး တယ်လို့မကြားဘူးတာခက်ပြီ။။။
သြော်…ဒီ MG မှာ က ကိုယ်တွေ့ သတင်းများ၊ ကိုယ်တွေ့ ဖြစ်ရပ် များ ကို ပြန်ဖောက်သည် ချနေတာလို့သိရှိထား ရတော့ အခါ ။ ပူတယ် လို့ ပြောသံကြားရ ပြန်တော့ သူ့ ခဗျာ တစ်ကယ့် ကိုယ်တွေ့ ကြီးလား လို့ သိချင်ပြန်မိရော ။
ဘီလူးလာမှတော့ သရဲက လန့်ပြေးမှာပေါ့။ နောက်ထပ် ဘာဖြစ်သေးလဲဟင်…
big cat နဲ့ fatty တို့က မြေနီကုန်း စီးတီးမတ်က ကော်ဖီဆိုင် မှာ ကင်မရာအိတ်ရှေ့ ချပြီး ထိုင်စောင့်မယ် ပြောကြတာ တစ်ပုံစံထဲပါလား။
ပါတနာ မို့ တူနေတာလား။
big cat ဆိုယင် fatty ကြီးမို့လို့ တစ်ကောင်ထဲ ကို နံမည် နှစ်မျိုး ခွဲရေးနေတာလား။
ကြောင်ဖက်တီး ကောင်စစ်ဝန်ရုံးမှာ ဗီဇာသွား မ၀င်ခင် အရင်ပြောခဲ့ ပါအုံး။
ရွာသားတွေအားလုံး ရှင်းရှင်းလင်းလင်း သိသွားအောင် ။ ။